साकार सपना - परिहास - नेपाल
सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानीले काठमाडौँको सडक धोइदिने सपना बाँडे । ऊ बेला उनका कुरालाई हावामा उडाए । सपना साकार पार्नै नपाई उनी दिवंगत भए । ठीक उसै गरी अहिलेका स्वप्नदर्शी नेता केपी ओलीका विभिन्न सपना पनि उडाइदिए । नेपालीको बानी नै हो, धैर्य पटक्कै छैन । महान् व्यक्तिका भिजनलाई उडाउने । अहिले हेर्नूस् त, मेलम्चीको पानी होइन, पाइप मात्र आइपुग्दा पनि काठमाडौँका धुलाम्मे सडक रातारात धोएर टिलिक्क पारियो । किसुनजीको सपना अहिले साकार भयो । स्वप्नदर्शी नेता ओलीको सुरुङ मार्ग योजना बनेको कति नै भयो र ? यो पनि पूरा भइहाल्यो । मेलम्चीका लागि बिछ्याउन ल्याइएका पाइपले बनाएको सुरुङबाट धमाधम दिनहुँ सयौँ मोटरसाइकल ओहोरदोहोर गर्न थालिसके । यो सबै देखेर भक्तपुरमा केपी ओली र स्वर्गपुरमा सन्तनेता कति दंग
परेका होलान् !
माल अड्डामा मन्त्रीको छापा
देउवा–समर्थक खोइ ?
अब अक्सिजन निर्यात
सुधारिएको कम्युनिस्ट पार्टी